Macallin Masaari ah oo wadne xanuun u dhintay xilli uu u dabbaaldegayey gool ay kooxdiisu dhalisay dhamaadkii ciyaarta | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Macallin Masaari ah oo wadne xanuun u dhintay xilli uu u dabbaaldegayey...
Macallin Masaari ah oo wadne xanuun u dhintay xilli uu u dabbaaldegayey gool ay kooxdiisu dhalisay dhamaadkii ciyaarta
(Qaahira) 05 Dis 2021 – Macallim Masaari ah oo 53-jir ahaa ayaa wadne xanuun u dhintay xilli uu u dabbaaldegayey gool ay kooxdiisu dhalisay daqiiqadihii dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu kordhiyey.
Kooxda uu El Magd oo uu watey Adham El-Selhadar Aayaa goolka dhalisay daqiiqaddii 2-aad ee ciyaarta lagu daray (92-aad) iyagoo 1-0 uga badiyey El Zarqa kulan ka tirsanaa Heerka 2-aad ee dalka Masar Khamiistii.
Goolka ayaa dhaliyey dabbaaldeg culus, balse in yar kaddib qosolkii wuxuu isu rogey qamuunyo kaddib markii uu dhulka ku dhacay El-Selhadar oo uu wadnuhu istaagey iyadoo dhoolli loogula orday isbitaalka.
Waxaase markii isbitaalka la keenayba lagu dhawaaqay inuu geeriyoodey, iyadoo ay naadiyada waawayn ee dalkaasi markiiba bilaabeen inay u diraan dhambaallo tacsi ah.
Waxaana ka mid ah kooxda Ismaily SC – oo uu isla El Selhadar mar macallin u ahaan jirey, iyadoo ay haatan socoto dood ku saabsan la socodka caafimaadka dadka ciyaaraha ku lugta leh ee dalkaasi kaddib shilal noocan ah oo soo noqnoqday.
Previous article20 qof oo iskugu jirta dhimasho & dhaawac kaddib markii ay booliisku gaari ku dhex daayeen dibedbaxayaal (Daawo)
Next article”Fadlan aan kala xishoonno!” – Waa kuma laacibka aad uga caraysiiya Ronaldo ee uu farriinta u qoray & cidda uu telkiisa ka qaatay